Velashape Body Contouring Factory | China Velashape Body Contouring mpanamboatra sy mpamatsy
Manamboara hozatra & Burn fa ...
Masinina Cavitation RF Lipolaser 6-In-1
Ny fitaovana Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 dia manambatra teknolojia marobe an'ny Multipolar sy Bipolar RF miaraka amin'ny Vacuum, 40K Cavitation ary Lipolaser.
Ny Multipolar RF mandroso dia mamoaka angovo mafana amin'ny sosona derma ary mampiditra onja elektromagnetika hamerina ny fizotra ara-batana. Manolotra valim-pitsaboana mahomby amin'ny cellulite, fanaovana sokitra amin'ny vatana ary famerenana amin'ny laoniny collagen.
Miaraka amin'ny lohan'ny onjam-peo mahery vaika, onjam-peo mahery 40KHZ dia mety havoaka hanetsiketsika sela matavy haingam-pandeha ary hamokatra paosin-drivotra maro ao anaty sy ivelan'ny sela matavy, misy fiantraikany mafy amin'ny sela matavy mba hiteraka fipoahana introverted ary hanaparitahana triglyceride ho glycerol ary afaka asidra matavy.
Fantatra amin'ny laser malefaka, laser mangatsiaka na laser amin'ny haavo ambany, lipolaser mampiasa angovo laser 650nm mena hiditra amin'ny hoditra, rehefa simulate ny sela matavy dia hamorona pores ireo sela membrane hanafaka asidra matavy sy glycerol. Ny sela matavy dia hodorana na hosotroin'ny fivezivezena amin'ny lymph miaraka amin'ny fitsaboana infrared.
Masinina manify Ultrabox 6 IN 1 Cavitation RF
Ny masinina dia mandray onjam-peo ultrasonic hahazoana ny vokatra andrasana amin'ny fanesorana tavy, izay ny vokatry ny Cavitation. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fiasa azo antoka fanapoizinana andon-invasive amin'ny tavy adipose, ity masinina ity dia mampiseho fandrosoana ara-teknolojia lehibe sy fampivoarana vaovao ny teknolojia fatdissolving manerantany.
Ny milina fampihenan-tena an'ny Cavitation RF dia mety hanapoaka ny Cellulite. Mifantoka amin'ny onjam-peo akustika matetika, dia mamokatra ny Cavitationeffect hipoaka ny Cellulite, amin'ny alàlan'ny famoronana miboiboika bitika kely ao anatin'ny sela matavy izay manindrona ary mahatonga ny sela matavy ho simba,
amin'izay dia mamoaka ny ranony matavy rehetra nefa tsy mandratra sela hafa, toy ny lalan-dra sy ny rafitra lymphatic. Aorian'izany dia fantatry ny vatana ho toy ny poizina ny sela matavy simba ary mandehandeha manala azy ireo amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny rafitra lymphatic sy vaskules. Ho fanampin'izany, ny rafitry ny Cavitation antsika dia tsy vitan'ny fipoahana ny Cellulite, fa koa manafaingana ny fivezivezena ary mampiroborobo ny metabolisma. Ankoatr'izay, afaka manamafy ny hoditra sy ny vatana izy io, mamoha ny herin'ny hozatra.
Mandritra izany fotoana izany, tazomy ny fisehoan'ny tanora. Ny rafitray Cavitation dia misy milina fampiantranoana, lohan-doha fitsaboana ny onja ultrasonika, lohan-doha fitsaboana Bipolar / Tripolar ary faritra hafa. Ny milina mpampiantrano dia manana hazavana 8cm LED Backlight Liquid Crystal displayand fanalahidy fanombohana. Ny LCD dia tsy natao ho an'ny toe-javatra ihany, fa mampiseho koa ny masontsivana sy ny fotoana fitsaboana.
Masinina kour contouring body Kuma
Kuma Shape Body Contouring Device dia rafitra fitsaboana synthetic ho an'ny fihenan'ny tavy izay manambatra ny fahita radio, hazavana infrared ary banga ary milina fanodinana mekanika, teknolojia efatra ao anaty milina iray.
Manafana ny faritra voatsabo ny angovo ka mahatratra ireo fantsona matavy ao ambanin'ny hoditra. Ny sela matavy dia miempo ao amin'ilay faritra voatsabo mandritra ny fitsaboana mba hahatratrarana ny fihenan'ny tavy.
Ny fahita matetika amin'ny radio (RF) miaraka amin'ny rouler roa dia afaka miditra ao amin'ny sosona 0,5-1,5 cm eo ambanin'ny hoditra mba hiasa tsara amin'ny tavy adipose.
Ny hazavana tsy mitongilana dia afaka manafana ny vatan'ny mpampifandray mba hanafainganana ny fiverenan'ny fibre collagen sy elastika. Izy io koa dia afaka manatsara ny fivezivezen'ny rà sy ny fivezivezy amin'ny lymph mba hampiroborobo ny metabolism.
Ny banga azo ovaina dia afaka mitroka ny faritra kendrena mankany amin'ny habaka eo anelanelan'ny rojo roa izay elektroda 2 tokoa. Izany dia afaka manao ny fitsaboana tsara sy mahomby.
Ny solo-tsolika koa dia manotra ny faritra voatsabo mba hamoahana ny havizanana sy ny hozatra. Ny fizotrany manontolo dia mafana sy tena ahazoana aina.
Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Device dia mifantoka amin'ny famolavolana vatana, fanamafisana ary fihenan'ny tavy.
a) Famolavolana vatana: tanjona ny hamolavola ny vatana mifantoka amin'ireo faritra misy olana. Izy io koa dia manolotra fanatsarana ny fivezivezena amin'ny lalan-drà, ny lalan-drivotra lymphatic, ny fanentanana ny collagen sy ny elastin.
b) Fampihenana tavy: ahena 70 ka hatramin'ny 80% ny cellulite.
c) Fanamafisana: Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fisehoan'ny cellulite sy ny famotehana ireo adiposities eo an-toerana dia very ny tonony ary manjary malemy izy, toe-javatra iray izay voararan'ny fitsaboana ity.
Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Device dia mandray ny haitao marobe an'ny Cavitation, Frequency amin'ny radio, hazavana tsy misy fotony, fanerena ratsy ary mekanika Roller.
Kuma Shape Pro Body Contouring Device dia miasa miaraka amina teknolojia 5: Frequency amin'ny radio, hazavana tsy misy hatak'andro, Cavitation, fanerena ratsy ary mekanika Roller.
Ny fitsaboana dia fomba fitsaboana tsy manafika, izay mampiasa suction tsindrona tsindrona tsiranoka mba hampiakarana ny valan'aretina, derma ary tavy ao anaty, avy eo mamatotra sy mamelatra ireo sela mifandray amin'ny kortika samihafa, izay afaka mamaky tsara ny tavy ambanin'ny tany ary manisy fantsona kapilazy, ary mampiroborobo ny metabolismin'ny sela amin'ny alàlan'ny haingam-pandeha inefatra. Nanafana ny faritra voatsabo ny angovo mahatratra 43 degre Celsius Degree, izay miteraka asidra matavy. Ny asidra matavy dia mamoaka ny sela matavy amin'ny faritra voatsabo mandritra ny fitsaboana. Ireo sela matavy nianjera dia hoesorina amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fivezivezena ara-metabolika mahazatra.
Amin'ny alàlan'ny lohan'ny fitsaboana samihafa, izay mampifangaro ireo teknolojia 5, dia tanterahina ny fitsaboana, izay misy andiany 5 ka hatramin'ny 10 fivoriana any amin'ireo faritra hotsaboina mandritra ny 15 min ka hatramin'ny 2 ora, arakaraka ny isan'ny faritra .